Tag: Ciraaq | Sagal Radio Services
Sagal Radio Services • News Report • April 26, 2017
Daawo Sawiro la yaab leh oo laga soo qaaday dagaalka Mosul ee dalka Ciraaq
Dagaal culus ayaa wuxuu galbeedka Mosul ku dhex maray xoogagga xukuumadda Ciraaq iyo mintidiinta dawladda Islaamka.
Qaraxyo dad badan ku dhinteen oo ka dhacay suuq ku yaala magaalada Baqdaad
Ku dhawaad 21 ruux ayaa ku dhintay 40 kalana way ku dhaawacmeen labo qarax oo ka dhacay suuq mashquul badan oo ku yaala bartamaha magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq.
Kurdiyiinta oo bilaabay weerar ay ku doonayaan in ay dib ugu qabsadaan magaalada Sinjar
Kumanaan dagaalyahan oo Kurdish ah ayaa bilaabay maanta howlgal ay magaalada waqooyi ee Ciraq ee Sinjar dib ugaga qabsanayaan kooxda Daacish.Ururka Daacish ayaa Sinjar qabsatay bishii August ee 2014-kii, iyaga oo argagax geliyey dadka laga tirada badan yahay ee Yazidi-ga, kumanaan ka mid ahna ku qafaashay buuraha.
Qabrigii Sadaam Xuseen oo ku bur buray dagaalada ka socda magaalada Tikrit
Qabrigii uu ku aasnaa Madaxweynihii hore ee Ciraaq Sadaam Xuseen ayaa ku bur buray dagaalka ka socda magaalada Tikrit.
Ciidamada Ciraaq iyo kuwa Kurdiyiinta oo isu diyaarinaya sidii ay dib ula wareegi lahaayeen magaalada Mosul
Ciidamada Ciraaq iyo kuwa Kurdiyiinta ayaa isu diyaarinaya sidii ay dib ula wareegi lahaayeen magaalada labaad ee ugu weyn dalka Ciraaq ee Mosil, halkaasoo bishii June ee sanadkii hore ay la wareegeen ISIS.
Dowladaha Soomaaliya iyo Ciraaq oo kala saxiixday heshiis dib loogu dhisayo Isbitaalo iyo Iskuulo
Dolwadaha Soomaaliya iyo Ciraaq ayaa kala saxiixday heshiis ku kacaya 15 milyan oo doolar oo dib loogu dhisayo isbitaalka Lansareti iyo Machadka tababarka SIDAM.